Silver Nanoparticles, Ọla kọpa Nanoparticle, Multi Walled Carbon Nanotubes - Hongwu
Oké Ọnụ Ahịa Nanoparticles
Nanoparticles ọla ọcha
Nanoparticles ọla edo
Okpokoro Dị Oké Ọnụ Ahịa
Nano Graphene Oxide Gaa
Nano Diamond ntụ ntụ
Carbon Nanotubes ejiri okpukpu abụọ
Ejiri Carbon Nanotubes Functionized
Ọla kọpa Nanoparticles
Silver ntekwasa ọla kọpa ntụ ntụ
Ngwongwo oxide Nanoparticles
Nanoparticles ọla kọpa
Aluminom oxide Nanoparticles
Ngwunye India Indiide
Magnetik Iron oxide Nanoparticles
YSZ Yttria Nọgidere Zirconia
Ngwongwo Zirconium Oxid Nanoparticles
Boron Nitride ntụ ntụ (BN)
Titanium Nitride ntụ ntụ (TiN)
Aluminom Nitride ntụ ntụ (AlN)
Boron Carbide ntụ ntụ (B4C)
Silicon Carbide ntụ ntụ (β-SiC-p)
Titanium Carbide ntụ ntụ (TiC)
Titanium Diboride ntụ ntụ (TiB2)
Zirconium Diboride ntụ ntụ
Ọla kọpa Nanowires (CuNWs)
anyi bu ihe nganga na-emepụta, nkwakọ ngwaahịa na n'ire anyị ngwọta onwe anyị ruo ọtụtụ afọ.
Hongwu nwere ikike nke ụlọ ọrụ ngwaahịa na ụlọ nyocha mmepe, ụlọ nyocha, ụlọ nyocha nyocha etinyere na ọdụ nnwale pilot, bụ ọkachamara na azụmaahịa nke ọtụtụ ngwa ngwa na ngwa ngwa nke narị afọ nke iri abụọ na otu kemgbe 2002. Anyị na-enyocha ahịa. , emepe emepe otutu teknụzụ, na-enye ihe nchoputa ngwọta na-eji anyị nanomaterials nka, mere ka renovating ọdịda mkpụmkpụ nke omenala ihe.
inyocha anyị isi CATEGORIES
Nwere ike ịhọrọ nanomaterials na-abụghị shelf ma ọ bụ hazie ya ka ọ dabaa maka mkpa gị.
ỌR NAN AKW NANKWỌ AKWETKWỌ
Imeri site n'onye pụtara ìhè
talent na ihe ndị dị elu
NKPUTA NJIME NILE ANY.
Ozi Hongwu: dị ka onye na-azụ ahịa ọkachamara n'ọhịa nke ihe ọhụrụ dị ọhụrụ na ọrụ metụtara ya
Uru Hongwu bara: ogo na ndị ahịa buru ụzọ, eziokwu na ntụkwasị obi, ọrụ klaasị mbụ.
Hongwu si management nkà ihe ọmụma: modular management, arapara ahịa na-agba mbọ, izute ezi uche chọrọ nke ndị ahịa dị ka ibu ọrụ. Gbado anya na ọrụ jiri miri ịkọ ma jiri nlezianya na-akọ.
Adgbaso ahịa gbakwasara, na-eju afọ ahịa 'ezi uche na-achọ ka Hongwu onwe ya ibu ọrụ, na-elekwasị anya na ụlọ ọrụ, intensively ịzụlite, ịbụ ọkachamara soplaya na yiri na-eweta ọrụ na ubi nke nano-ọhụrụ ihe, na mgbakwunye na nke inye ot ngwaahịa, ya nwekwara ike ahaziri dị ka ndị ahịa chọrọ. Anyị ga-anọgide na-melite ngwaahịa mma na ọrụ etoju, mma-ejere ndị ahịa anyị si n'ụlọ na mba ọzọ, acheive mmeri-mmeri ịga nke ọma.
Hongwu nwere akụrụngwa mmepụta ngwa ngwa, usoro usoro dị elu yana sistemu njikwa njikwa zuru oke. N'ime usoro mmepụta, a na-etinye ụkpụrụ izizi nke ụlọ ọrụ na-eme ihe dị mma. Iji hụ na ngwaahịa ndị emepụtara dị ezigbo mma.
Hongwu nwere ndị ọrụ R & D ọkachamara nwere ndị ọkachamara nanotechnology nwere ahụmahụ na ndị injinia dị elu, ụmụ akwụkwọ doctoral, na ndị prọfesọ na mmepe nke ngwaahịa ọhụrụ. Na Hongwu Research Institute na mahadum dị ka nkwado teknụzụ, anyị na-agbaso ngwa ahịa ahụ ma na-aga n'ihu ịzụlite ma mepụta ihe ọhụrụ.
Maka ọrụ nke ụlọ ọrụ n'ozuzu ya, anyị nwere ndị ọrụ nchekwa na ndị a zụrụ nke ọma, gụnyere ọrụ mmadụ, nchịkwa, ego, ị nweta, ngwa ngwa, iwu, ego na akụkụ ndị ọzọ iji nye nchebe zuru oke, ndị ọrụ ụlọ ọrụ niile na-arụ ọrụ ọnụ, na-arụsi ọrụ ike, na imirikiti na nkwado nke ndị ahịa si n'ụlọ na mba ọzọ, anyị na-ekepụta ebube ọhụrụ mgbe niile.
Ihe nyocha Ngwa
Electromagnetic Wave nnweta ihe
ihe anyi Ndị ahịa kwuru
Anyị emeela ọtụtụ nyocha iji nweta nsonaazụ na-eju afọ. N’oge na-adịghị anya ngalaba nzụta anyị ga-ahazi iwu ọhụrụ. Biko kwadebe anyị 8-10kg ntụ ntụ ntụ maka anyị ma hụ na ọ bụ otu ihe na usoro ikpeazụ. Daalụ
Abatara ngwa ngwa na nnukwu ihe eji. Anyị na-anwale ya ugbu a na ọkwa anyị ma ruo ugbu a ọ na-eme nke ọma, enwere m olileanya na ọ ga-agbakwunye nchebe ruo ogologo oge. Enwere mmiri mmiri ọ bụla ma ọ bụ ntụ ntụ ị nwere nke nwere ike ịgbanye na mmanụ / ihe mgbaze / waxes nke ga-enyere ya aka ịsọ oyi nke mmiri anyị nwere ike iji n'akụkụ sio2 ntụ ntụ.
ZnO nanopowder gara aga dabara na ngwa anyị. Anyị ga-enweta 800kg ọzọ. Biko zitere m onyinye na nke ahụ na 2000kgs ma gosipụta oge mbu. Daalụ.
Maka 100-200nm Si, Ikpeazụ 3kg na-arụ ọrụ dị mma maka ngwa anyị. Anyị ga-achọ ịgba ọsọ usoro nnwale 20kg n'ọnwa na-abịanụ, usoro ọzọ ga-abụ 100kg. Biko gosi ọnụahịa gị kachasị mma, mbupu na ibute oge maka 20kg na 100kg, daalụ.
Ruo ugbu a Pt nanopowder ule dị mma, anyị chọrọ 10g ọzọ maka ule na nyocha ASAP. Biko ziga akwụkwọ ọnụahịa Proforma.
Ajụjụ maka Ngwọta
Industrial ngwa gbakwasara, adapting na-agbanwe agbanwe mkpa. Ruo afọ iri abụọ gara aga, anyị na-ewuli aha anyị na ụlọ ọrụ ndị ahịa anyị site na ịdị mma na-agbanwe agbanwe na ezigbo ngwọta.
Conductive na antistatic nanomaterials eji na akwa na chemical eriri ọrụ
Mmepe nke nanotechnology na nanomaterials na-enye uzo ohuru na echiche maka nrigbu nke ngwaahịa antistatic. Omume ikuku, electromagnetic, super absorptive na brọdband Njirimara nke nano ihe, kere ọnọdụ ọhụrụ maka nyocha na mmepe nke conduc ...
Na cesium tungsten ọla nanoparticles, oge nke nwere ọgụgụ isi okpomọkụ mkpuchi abịa!
Ihe mkpuchi mkpuchi mkpuchi iko bụ mkpuchi akwadebe site na ịhazi otu ma ọ bụ ọtụtụ ihe nano-powder. Ihe nano-ihe eji eme ihe nwere ngwa anya puru iche, ya bu, ha nwere onu ogugu di elu na mpaghara infrared na ultraviolet, na ntaneti di elu na mpaghara oku a na-ahu anya. Anyị ...
Ihe Nanoparticles na Piezoelectric ceramik
Piezoelectric ceramik bụ ụdị ozi arụ seramiiki ihe nwere ike tọghata n'ibu ike na electric ike ọ bụla ọzọ. Ọ bụ mmetụta pezoelectric. Na mgbakwunye na piezoelectricity, piezoelectric ceramik nwekwara dielectricity, elasticity, wdg, nke e n'ọtụtụ ebe ...
Ndị otu anyị gafere inye gị ọrụ Nanomaterial dị mma na ọrụ kacha mma. Kpọtụrụ anyị taa! Ọrụ: Ngwongwo Ngwongwo Dị Oké Ọnụ Ahịa, Ngwongwo Ngwongwo, Metal Oxide Nanoparticles, Nanotubes, Nanowires Na Colloidal.
Copyright - 2002-2020: Guangzhou Hongwu Material Technology Co., Ltd. Ikike niile echekwabara.